mini-miti inoshandisa mafuta motori matairi 2
Basa reKlimov Design Bureau tsvina yekushandura mumoto motokari
OOO Klimova Design Bureau (INN 4205312946 Russia, Kemerovo, www.potram.ru) inobatanidza kushandiswa kwezvirimwa uye zvinyorwa pamusoro we "kubva kumaduku kusvika kumazana." Nheyo yemishonga yose yakaiswa zvikamu "KID". Chikamu "BABY" - yakabatanidzwa pakuiswa kwekukura kuita chimwe chebasa reimwe nzira yekugadzira zvinhu, imwe brick LEGO. Chero hurongwa hwekombiki hwakagadzirwa, tine sangano rekubatana kwakabatana, iyo miniti-plant "PROMETHEUS" yakaungana. Mini-plant inotora imwe nzira yekugadzira mitambo, sekutonga, imwe yekutanga. Kubva pane zviduku-mbeu "PROMETHEUS" zvigadzirwa zve "POTRAM" zvinoumbwa. Complexes «POTRAM» - chigadzirwa chikuru, chakaitwa mumusana-dimensional performance. Chinangwa che "POTRAM" chakaoma ndechekuwana chigadzirwa chemugove chakabva mune imwe nyaya yakasvibirira. Kuwedzerwa kwekugadzirisa kwemaitiro emakambani ePOTRAM kunoitwa nekuda kwekuiswa kwemimwe michina michina "PROMETEY" panzvimbo yekushanda. Plants "Prometheus" projected pasi akafanorongerwa specialization, sezvo nezvechisarudzo nokuti mbishi (matunhu neminisiparati tsvina, marasha, peat, shale) uye chokupedzisira chigadzirwa (chemubhotoro, lubricants, magetsi).
Sezvo mujinga chisarudzo "ispasire" chikamu anosarudzwa kuti gungano kwayo vanogona kununurwa gungano chirimwa "Prometheus" kana «POTRAM» zvakaoma kushandisa dzakawanda mugungwa uye njanji midziyo. Izvi zvinogadzira zvigadzirwa nemakambani zvakakurumidza kutanga zvinhu pane chero kupi zvako munyika.
Klimov Design Bureau Kunotangwa nokukurumidza vomurova zvivako pasi chirongwa "Prometheus". Purojekiti ye "PROMETHEUS" ndiyo kukurudzirwa kwekuvaka petrochemical kubva kudiki-tonnage kusvika kumahombekombe akawanda.